Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd yasungulwa ngo 2001. Singabantu umkhiqizi nabaphakeli yetinhlobo letibanti letehlukene tematheksthi wesitoreji yezimboni futhi commercial zindawo zokusesha ezethusayo izinhlelo kanye izinto yokusingatha Equipments.
We ngokukhethekile yokubonisana, emklamweni ukufakwa ngempumelelo zindawo zokusesha ezethusayo futhi isitoreji izixazululo; ukunikezela ngezinto zokwakha ezihlukahlukene yokusingatha imishini imikhakha ehlukahlukene yezimboni futhi commercial kanye ezizimele & umphakathi emhlabeni wonke.
Sisebenzisa high quality materials olunikezwa Shanghai Baosteel Group (kekulu steel ifektri e China). Sine eziphambili auto electrostatic powder Umdwebo umugqa futhi 2 pre-ukwelashwa yokuhlanza izinhlelo.
Ngezinye Spieth, sikholelwa ekuthengiseni imikhiqizo nezimpahla ukuqinisekisa izinga eliphezulu izinga ukuhambisana namazinga ezimbonini. Siphinde bakholelwa ukuthi yonke yokuthengisa iphrojekthi, kungakhathalekile ubungako bawo noma ukubaluleka, kufanele sibasekele Imininingwane ekuhleleni ngokusebenzisa wethu omuhle emva-sales service.
Ukuze inkonzo kangcono amakhasimende ethu, sesisungule pre-ukudayiswa nangemva-ukudayiswa service futhi benza imizamo ukunikeza amaklayenti ayo nge emihle, ngesikhathi esifanele kanye nezinsizakalo lobuchwepheshe esizayo ngamakhasimende. Spieth anelisa izidingo ezihlukahlukene amakhasimende ethu, ngcono ukwaneliseka ikhasimende, ukusungula eside ubuhlobo win win umlingani nawe!
Ifilosofi yethu ukusiza wena ukusebenzisa ngokugcwele nendawo yokugcina izincwadi, ukuphakanyiselwa database imvume ukusetshenziswa, isandiso ishede isitoreji ikhono. Siphinde ukunciphisa izindleko, zonke intshi njalo Dime elungiselelwe ngesikhathi Engineered Products.
foldable Wire Mesh Isitsha , Pallet zindawo zokusesha ezethusayo uprights , Pallet zindawo zokusesha ezethusayo zizivikele , gravity Flow zindawo zokusesha ezethusayo , Warehouse ka-Pallet zindawo zokusesha ezethusayo System , Warehouse ka-Pallet Rack ,